Horudhac: Atletico Madrid vs Chelsea… (Rikoorka wanaagsan ee uu Diego Simeone ka heysto tartankan oo halis ku ah Blues) – Gool FM
Horudhac: Atletico Madrid vs Chelsea… (Rikoorka wanaagsan ee uu Diego Simeone ka heysto tartankan oo halis ku ah Blues)
Haaruun February 23, 2021
(Bucharest) 23 Feb 2021. Kooxaha Atletico Madrid iyo Chelsea ayaa caawa ku wda dagaallami doona kulan ka tirsan lugta koowaad ee wareegga 16-ka tartanka UEFA Champions League ciyaar ka dhici doonta garoon dhex-dhexaad ah oo ku yaalla magaalada Bucharest ee ah caasimadda dalka Romania.
Ciyaartan ayaa markii hore ku jadwaleysneyd inay ka dhacdo garoonka Atletico Madrid ay ku ciyaarto ee Wanda Metropolitano, hase ahaatee, caqabado dhanka safarka ah oo ay u wacan tahay saameynta xanuunka Korona Fayras ayaa loogu weeciyay in lagu ciyaaro koonfurta dalka Romania.
Tartanka: Yurub– Chamions League
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 11:00 Galabnimo xilliga geeska Afrika.
Garoonka: Arena Națională
Garsooraha: Felix Brych (Germany)
Chelsea ayaanan caawa heli doonin daafaca waaya-aragga ah ee Thiago Silva kaasoo dhaawac ku seegaya ciyaartan lugta koowaad ee wareegga 16-ka tartanka Champions League, balse waxaa safka kooxda kusoo laabtay Christian Pulisic iyo Kai Havertz kuwaasoo diyaar u ah inay wajahaan Atletico.
Jose Gimenez, Sime Vrsaljko iyo Yannick Carrasco ayaa dhammaantood dhaawacyo ku seegaya ciyaartan halka Hector Herrera dhowaan laga helay xanuunka Korona waxaana uu ku jiraa xiddigaha ka maqan caawa naadiga hoggaamineysa horyaalka La Liga.
Kieran Trippier ayaa isaguna ganaax ku seegaya ciyaartan kaddib markii uu jebiyay xeerarka xakameynta cudurka dunida aafeeyay ee Koofid.
Guud ahaan is aragyada labada koox ee tartammada Yurub waa garbo simman dhan walba, waxay guulo kala gaareen min labo jeer, saddex barbarro ayay galeen, waxayna iska dhaliyeen min 11 gool.
Atletico Madrid ayaa kasoo gudubtay Chelsea halka jeer oo ay labadan koox isku arkeen wareegyada bug-baxda ee tartanka Champions League, waxayna ahayd fasalkii 2013-14 oo ay Los Rojibalancos kusoo baxday natiijo 3-1 ah isku darka labada lug.
Atletico ayaa markii toddobaad soo tiigsaneysa wareegga bug-baxda Champions League siddeeddii xilli ciyaareed ee ugu dambeysay, halka Chelsea ay markii ugu horreysay dooneyso inay kasoo gudubto wareeggan 16-ka tan iyo xilli ciyaareedkii 2013-14 xilligaas oo ay Semi-finalka waji-gabax kala kulantay naadiga ay caawa la balansan yihiin.
Tababare Diego Simeone ayaa guuldarro la’aan ah marka uu garoonka kooxdiisa ku ciyaarayo wareegyada bug-baxda Champions League isagoo guuleystay sagaal jeer, afar kalena barbarro galay.
Kaliya hal gool ayaa Atletico Madrid looga dhaliyay garoonkeeda (Vicente Caldero iyo Wanda Metropolitano) 12-kii kulan ee ugu dambeeyay wareegyada bug-baxda Champions League, waxaana goolkaas qura ka dhaliyay Real Madrid ciyaar ay 2-1 guusha ku raacday Atletico.
Atletico ayaa xilli ciyaareedkan wareeggii guruurbyada Champions League ka dhalisay kaliya toddobo gool, waana kooxda goolasha ugu yar ka dhalisay tartankan ee usoo gudubtay wareegga 16-ka.
Dhanka kale, Luis Suarez oo xilli ciyaareedkii siddeedaad ciyaaraya tartanka horyaallada Yurub ayaanan marna ku guuldarreysan inuu gool dhaliyo ama caawiyo xilli ciyaareed walba oo uu hore u ciyaaray , balse afar kulan oo uu kooxda reer Spain u saftay fasalkan wax gool ah ma dhalin, sidoo kalena ma uusan sameyn wax caawin ah.
Chelsea waa kooxda kaliya ee Atletico Madrid ku garaacday garoonkeeda Wanda Metropolitano tartanka Champions League, waxayna ahayd ciyaartii ugu horreysay ee tartan Yurub ah oo garoonkan ay ku ciyaarto naadig ka dhisan caasimadda Spain ee Madrid bishii September ee sanadkii 2017, xilligaasna Blues ayaa ku adkaatay 2-1.
Chelsea waxay ka mid ah tahay afar koox oo guul gaaray dhammaan saddexdii kulan ee ay bannaanka kusoo ciyaareen wareeggii guruubyada, waxaana ay sidaas kala simman tahay Atalanta, Barcelona iyo Juventus, Blues ayaase dhalisay goolal ka badan kooxaha kale xilli ciyaareedkan kulammada bannaanka Champions League iyagoo shabaqa taabsiiyay 10 gool.
Chelsea ayaase wax guul ah kusoo gaarin bannaanka garoonkeeda kulammada bug-baxda Champions League tan iyo 2012 xilligaas oo ay Benfica guul kaga soo gaareen dalka Portugal.
Weeraryahanka Chelsea ee Olivier Giroud ayaa 28 daqiiqo walba oo uu ciyaaro gool dhaliyay xilli ciyaareedkan tartanka Champions League kaddib shan gool oo uu ku dhaliyay 142 daqiiqo, waana ciyaaryahanka ugu wanaagsan celceliska daqiiqada goolkiiba xiddigaha dhaliyay wax ka badan hal gool.
Marka la eego goolhayeyaasha ciyaaray wax ka badan saddex kulan xilli ciyaareedkan Champions League, Chelsea xiddigeeda shabaqa ilaaliya ee Edouard Mendy ayaa heysta celceliska ugu wanaagsan ee badbaadinta, waxaana uu badbaadiyay 94% darbooyinka uu wajahay, kaliya hal gool ayaana laga dhaliyay iyadoo lagu tuuray 16 darbo oo toos ah.
“Markaad la ciyaareyso Atlético Madrid, waa inaad sida ugu fiican wax u qabataa.” – Thomas Tuchel
“Suarez wuxuu iska diiday Paris Saint-Germain.” – Thomas Tuchel